गर्भावस्थामा पोषण : कस्ता महिलाले कुन चिज कति खाने ? – Health Post Nepal
२०७५ चैत ८ गते १५:०१
सामान्यतया गर्भावस्थामा पनि अन्य समयजस्तै खानेकुरा खाने गरिन्छ । तर, गर्भावस्थामा अन्य समयमा भन्दा केही बढी पोषणको आवश्यकता पर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा केही बढी खानेकुराको आवश्यकता पर्छ । विशेषगरी शरीरलाई सुरक्षा दिने खानेकुराहरू, हरियो सागपात, पहेँलो तथा रातो फलफूल, भिटामिन ए तथा सीयुक्त खानेकुराले शरीरलाई रोगबाट बचाउने गर्छ । त्यस्ता खानेकुराको आवश्यकता अन्य समयमा भन्दा गर्भावस्थामा केही मात्रामा बढी हुन्छ ।
त्यसैगरी शरीरको वृद्धि–विकासमा सहयोग गर्ने खानेकुरा, जस्तै, दही, दूध, माछा, मासु, सबै प्रकारका गेडागुडी, दाल, तिल, माछालगायत खानेकुरा अन्य समयमा भन्दा गर्भावस्थामा दैनिक रूपमा खानुपर्ने हुन्छ ।
बच्चाको रगत, बोसो तथा गर्भवती महिलाको पाठेघरमा रहेको सालको समेत हिसाब गर्दा गर्भवती महिलाको तौल करिब १६ केजीसम्म बढ्नुलाई सामान्य नै मानिन्छ । तर, मोटी महिलाको हकमा भने अधिकतम ११ केजीसम्म तौल बढ्नु आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि गर्भवती महिलाले दैनिक रूपमा खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
मानिसको शरीरलाई शक्ति दिने खानेकुरा, जसले हिँडडुलका लागि सहयोग गर्छ, त्यस्ता खानेकुराको आवश्यकता गर्भावस्थामा धेरै हुन्छ । गर्भावस्थामा शक्तिको सञ्चय कमै हुने तथा कमजोर महसुस हुने कारणले त्यस्ता खानेकुराहरू अन्य समयमा भन्दा बढी आवश्यक पर्ने गर्छ । सामान्य अवस्थामा खाने गरेका चिजको सन्तुलन मिलाएर केही मात्रामा गर्भावस्थमा बढी खानुपर्ने हुन्छ ।
सामान्य अवस्थामा रहेको तौल बढाउनका लागि यस्ता खानेकुरा गर्भावस्थामा सन्तुलन मिलाएर केही बढी खानुपर्ने हुन्छ । तौल बढाउने भन्दैमा आवश्यकताभन्दा बढी खानेकुरा खानु गर्भावस्थामा आमा तथा बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिँदैन ।
खानेकुराको मात्रामा कमी भएमा बच्चाको तौल एकदमै कम हुन जान्छ । दुब्लो–पातलो मान्छेले गर्भावस्थामा करिब १६ केजीसम्म तौल बढाउनुपर्ने हुन्छ भने मोटी महिलाले साढे ११ केजीभन्दा बढी तौल बढाउनु राम्रो मानिँदैन । गर्भमा रहेको बच्चा साढे २ केजीदेखि ४ केजीसम्म हुनु सामान्य मानिन्छ । त्यसमा पाठेघरमा रहेको साललगायत पदार्थ साढे २ केजी, स्तन १ केजी, रगत र पानीको मिश्रण ३ केजीसम्म, आमाको शरीरको बोसो साढे २ केजीसम्म हुने गर्छ । तसर्थ, बच्चाको रगत, बोसो तथा गर्भवती महिलाको पाठेघरमा रहेको सालको समेत हिसाब गर्दा गर्भवती महिलाको तौल करिब १६ केजीसम्म बढ्नुलाई सामान्य नै मानिन्छ । तर, मोटी महिलाको हकमा भने अधिकतम ११ केजीसम्म तौल बढ्नु आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि गर्भवती महिलाले दैनिक रूपमा खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्वस्थ आमाले मात्रै स्वस्थ बच्चा जन्माउने भएकाले गर्भावस्थामा पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुराको आवश्यकता बढी परेको हो । गर्भावस्थामा आमाको स्वास्थ्य नै बच्चाको स्वास्थ्य भएकाले गर्भवती महिलाले यस अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
गर्भवती भएको कति महिनामा कति तौल बढाउने ?
गर्भ रहेको पहिलो ३ महिनामा १ केजीदेखि ३ केजीसम्म तौल बढ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा आधा–आधा केजी तौल बढ्दै गएमा त्यो पर्याप्त मानिन्छ । मोटी महिलामा भने आधा केजीको पनि आधा (चौथाइ केसी) प्रतिमहिना बढेमा पर्याप्त मानिन्छ ।
गर्भावस्थामा खानेकुरामा प्रोटिनको मात्रा एकदमै आवश्यक पर्ने गर्छ । प्रोटिनयुक्त खानेकुराले गर्भमा रहेको बच्चाको वृद्धि–विकासमा विशेष भूमिका खेल्नेगर्छ । त्यसकारण गर्भावस्थामा प्रोटिनयुक्त खानेकुराको आवश्यकता बढी पर्न गएको हो । सामान्यतया गर्भ रहेका वेला जुनसुकै खानेकुरामा त्यति रुचि नहुने भएकाले खानेकुराको मन नभएमा पनि प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ ।
खानेकुरामा त्यति मन नभए पनि आफ्नो तथा बच्चा दुवैको ख्याल गर्नका लागि खानेकुरा खाइरहनुपर्ने हुन्छ । सबै प्रकारका गेडागुडी, दही, माछा, मासु, अण्डाजस्ता खानेकुराहरू प्रोटिनयुक्त खानेकुराको उपयुक्त स्रोत हुन् । दैनिक रूपमा कम्तीमा एकपटक भए पनि प्रोटिनयुक्त खानेकुरा गर्भावस्थामा खानुपर्ने हुन्छ ।
हरियो सागपात, फलफूल तथा गेडागुडी खाएपश्चात् विशेषगरी शाकाहारी जीवनशैली अपनाउने गर्भवती महिलाले भिटामिन सीयुक्त खानेकुराहरू खानु आवश्यक मानिन्छ । उनीहरूले दालसँग कागती, काँक्रो तथा काचो गोलभेँडाको सलाद खानु राम्रो मानिन्छ । त्यसबाट आइरन तत्त्व पाउन सकिन्छ । माछा, मासु तथा कलेजो खाने गर्भवतीले भने यस्ता खानेकुराको सेवनपश्चात् भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा खानु आवश्यक छैन ।
फलामयुक्त तत्त्वको पनि यस अवस्थामा आवश्यकता पर्ने गर्छ । कलेजो, मासु, माछालगायत खाद्यपदार्थमा फलामयुक्त खानेकुरा पाइन्छ । फलामयुक्त तत्त्वले शरीरमा रगत बढाउने काम गर्छ । पशुजन्य खानेकुरामा कलेजोबाट मानिसले फलाम तत्त्वलगायत अन्य पौष्टिक तत्त्वसमेत प्राप्त गर्छन् । गर्भावस्थामा हुन सक्ने रक्तअल्पताबाट बच्नका लागि फलामयुक्त खानेकुराको आवश्यकता पर्न जान्छ । हरियो सागपात, फलफूल, गेडागुडीलगायत खानेकुरामा फलामको मात्रा पाउन सकिन्छ । हरियो सागपात, फलफूल गेडागुडीलगायत खानेकुरा खाएका समयमा भिटामिन सीयुक्त खानेकुराहरू खानु पनि गर्भावस्थाका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ ।
गर्भावस्थामा फोलिक एसिडको आवश्यकता पर्छ । यसले नशा तथा दिमागको वृद्धि–विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । कलेजो फोलिक एसिडको एकदमै राम्रो स्रोत हो । शाकाहारी महिलाले भने फोलिक एसिडको ट्याबलेट खान सक्छन् । त्यसैगरी हरियो सागपात तथा गेडागुडीमा पनि कलेजोमा पाइने तत्त्त्व पाउन सकिन्छ ।
क्याल्सियम पनि गर्भावस्थाका लागि आवश्यक पोषक तत्त्व हो । गर्भवती अवस्थामा आमाको हड्डी बलियो बनाउन तथा बच्चाको हड्डीको विकास गर्न क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ । गर्भवती अवस्था तथा सुत्केरी भएको करिब एक महिनासम्म क्याल्सियमको ट्याब्लेट दिने गरिन्छ । त्यसपश्चात् भने सामान्यतया खानाबाटै क्याल्सियमको परिपूर्ति भइरहेको हुन्छ । मुख्यतया दूध तथा दूधका परिकार र सानो माछाबाट क्याल्सियम प्राप्त गर्न सकिन्छ । सानो माछाको हड्डी नै चपाएर खाइने भएकाले यसमा क्याल्सियमको मात्रा प्रशस्त पाउन सकिन्छ । ज्वानोमा पनि प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाइने भएकाले सुत्केरीको समयमा सामान्यतया ज्वानो खुवाउने प्रचलन छ ।
समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा गर्भावस्थामा क्याल्सियम, आइरन, फोलिक एसिड, प्रोटिनलगायत पौष्टिक तत्त्व आवश्यकता हुन्छन् । समान्यतया अन्य समयमा भन्दा गर्भावस्थामा यी तत्त्वहरू सन्तुलित सेवन बढी आवश्यक हुन्छ ।
गर्भावस्थामा यीमध्ये कुनै पनि पौष्टिक तत्त्वको पर्याप्त मात्रामा परिपूर्ति हुन नसकेमा त्यसको प्रभाव गर्भमा रहेको बच्चामा पर्ने गर्छ । यदि आमा नै रोगी भएमा तथा डेलिभरीका क्रममा बढी मात्रामा रगत बगेमा त्यसको असर गर्भमा रहेको बच्चामा पर्न जान्छ ।
(ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा ४ वर्षदेखि कार्यरत आयरल्यान्डका नागरिक पोषणविद् जिम्बरम्यानसित हेल्थपोस्टकी लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)